Nọgidenụ na-Handy: The 10 New Iwu nke Nsogbu Nkwurịta Okwu | Martech Zone
Jide Aka a: Iwu 10 Ọhụrụ nke Nsogbu Nkwukọrịta
Saturday, April 11, 2015 Sunday, Eprel 19, 2015 Douglas Karr
Agencylọ ọrụ anyị dị na Indiana na mgbe ndị ike-ịnọ na steeti gafere nsụgharị nke Iwu Mweghachi Nnwere Onwe Okpukpe (RFRA), nsogbu malitere. Ọ bụghị nanị nsogbu gọọmentị. Ebe ọ bụ na ọ metụtara ngalaba azụmahịa, ọ ghọrọ nsogbu nye anyị niile na-azụ ahịa n'ime steeti. Karịsịa mgbe ụfọdụ ndị isi azụmaahịa na-abụghị steeti malitere ikwu okwu ma yie egwu ịghara ịhapụ steeti ahụ (na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ha etinyebeghị iyi egwu ahụ na mba ndị ha na-ere na iwu ịkpa oke na enweghị nnwere onwe iwu).
Ndị m kpọtụrụ na steeti na-agwa m na a ga-adọ ndị ike dị ike aka na ha na-aga n'oké ifufe na ọ dịghị mkpa. Ma ị na-akwado ma ọ bụ na-emegide iwu adịghị mkpa. Nsogbu ahụ malitere - na azụmaahịa ọ bụla kpara nkata iji gbalịa ịdaba n'ọnọdụ ahụ. Ọ bụ (ma na-aga n'ihu), ezigbo nro.
RFRA bụ ihe otu akụkụ na-eme site na imirikiti ya mere na enweghị nnyocha ọ bụla na ndị na-ege ntị, yana ya na ndị azụmaahịa ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa ekwurịtaghị.
Nnupụisi nke azụmaahịa na-esote dara ụda mana ọ gwaghị n'ụzọ ziri ezi na ọ bụ ọtụtụ azụmaahịa Hoosier, ọ bụghị naanị ndị pere mpe metụtara, jụrụ iwu ahụ.
Ihe si na ya pụta bụ na ma ndị otu na-ahụ maka ya na ndị mmegide nwere nsogbu na aka ha. Ndị ọrụ ahụ kwesịrị ịla azụ ozugbo na-enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụ nhọrọ ọ bụla. Ndị mmegide ahụ ga-ahazi ma gbalịa ịwulite otu olu nke na-agwa ụlọ ọrụ na mpụga steeti mkpesa nke iwu a.
Ndi oru mgbasa ozi gbagoro na ohere ha ji tuo nkụ na oku ma nweta oku oku. A manyere azụmahịa dị ka nke anyị ịhapụ nkwupụta nke anyị. (Anyị arịọghị, ma ọ bụ kwado, iwu n'agbanyeghị okpukpe m). Ọ bụ oke mmiri ozuzo zuru oke.
Ikekwe nzaghachi kachasị mma sitere na Indianapolis Office nke Mayor, onye - mgbe ọ na - achọghị mgbanwe - na - ekwupụta okwu nke azụmaahịa na mpaghara ahụ nke ọma ma tinye onwe ya n'ụzọ dị irè n'ọnọdụ onye isi karịa nke gọvanọ. Ọ bụ ezigbo njem ma ọ dị ka ọ wedara ụfọdụ nsogbu.
Ihe isi ike nke nsogbu a niile, n'echiche m, bụ na ọ bụ n'ezie Hoosiers kwupụtara mmegide ha nke ukwuu… mgbe ahụ azụmaahịa ndị dị na mpụga ebe ahụ malitere ikwu banyere ịhapụ Indiana-na ndị Hoosiers kwupụtara mmegide ha. Enwere m mmechuihu na azụmaahịa ndị na-abụghị Indiana nke chọrọ imejọ ndị anyị mere ihe ma manye ndị isi mpaghara anyị ime mgbanwe ozugbo.
A gbara m ajụjụ ọnụ Ray Steele banyere ọnọdụ dị na WIBC:
Nsogbu na-adịghị mma n'ezie. Olileanya m bụ na ọ bụ ihe mmụta nke Gọvanọ mụtara. O doro anya na ọ ga-agbake, na ezi ihe kpatara ya.
The Agnes + Day nsogbu ọgụgụ isi otu emebela otu infographic nke gosipụtara 10 iwu ọhụrụ dị mkpa nke nkwukọrịta nsogbu. Biko nweere onwe gị ibipụta ya maka ndị otu gị ma kesaa ya na netwọkụ gị.
Gụ nke ọ bụla n’ime iwu ndị dị n’okpuru, ị ga - ahụrịrị ebe ihe adịghị mma na Indiana.
Tags: ụbọchị agnesapụliolọnsogbunkwurịta okwu nsogbunjikwa nsogbukpachaara anyagreg ballardIndianamike penceprmmekọrịta ọhanezeray steeleNkechindị ahịawibc
Newkpụrụ Ecommerce Ọhụrụ Abụọ I Kwesịrị Trachọ